Safafka rasmiga ah Kulammada caawa Europa League ee Kooxaha Wolves vs Sevilla & Shakhtar Donetsk vs Basel oo la shaaciyay – Gool FM
Haaruun August 11, 2020
(Yurub) 11 Agoosto 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoommada ku soo galayaan caawa afarta kooxood ee Shakhtar Donetsk oo la ciyaareysa Basel iyo Wolves oo wajahaysa Sevilla.
Kooxahan ayaa wada ciyaari doona kulammo ka tirsan siddeed dhammaadka tartanka Europa League, labo ka mid ah Shakhtar Donetsk, Basel, Wolverhampton Wanderers iyo Sevilla ay gaari doonaan afar dhammaadka tartankan.
Kulammadan oo min hal lug ah ayaa kooxdii caawa adkaata waxa ay iska xaadirin doontaa afar dhammaadka tartankan, iyadoo Semi-finalka Europa League Shakhtar Donetsk iyo Basel kooxdii soo baxda ay la dheeli doonto Inter Milan.
Kooxdii soo badisa Wolverhampton Wanderers iyo Sevilla ayaa dhankeeda waxa ay afar dhammaadka Europa League la dheeli doontaa Manchester United.
Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka afarta kooxood ay garoonka ku soo galayaan oo dhammaystiran:-